This letter could beastrong evidence at ICC to prosecute U Wira Thu and his political masters | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ…. အို မွတ်စလင် (၁)
Rakhine Criminal MP Dr Aye Mg’s interview with BBC »
“ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်)ကိုပဲ အားမကိုးပါနဲ့ဘုရား”ဟူသော စကားကို ကြိုဆိုပါသည်။ မိမိသည် ၂၀၀၃-ခုနှစ်ကတည်းက မိမိ၏ သရဖူကို အလဲထိုးအနိုင်ယူဖို့ ဖိတ်မန္တကပြုခဲ့ဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိထက်သာလွန်သော၊ မိမိနှင့် မတူတမူထူးခြားသော အတွေးအခေါ်အမြော်အမြင် နည်းသစ်စနစ်သစ်တို့ဖြင့် အမျိုးဘာသာသာသနာအရေး ဆောင်ရွက်မည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့စည်းကို မဆို အားကူညီထောက်ပံ့ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
“တရားသူကြီးသဖွယ်လုပ်နေပါတယ် ဘုရား”ဟူသော စကားကိုလည်း ဝန်ခံပါသည်။
“သူနားမလည်တာတွေ အများကြီးပါဘုရား”ဟူသော စကားကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
“နောက်မှ ဆက်လက်အသိပေးပါမည်ဘုရား”ဟူသော စကားအရ နောက်ဆက်တွဲ အသိပေးချက်များ ကိုလည်း မျှော်လင့်နေပါသည်။
“ဝီရသူကို မလုပ်ကြံပါနှင့်”ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
Tags: Advocacy Organizations, Burma, Human rights, Human Rights and Liberties, Muslim, Myanmar, Organisation of Islamic Cooperation, Rohingya people
This entry was posted on October 29, 2012 at 2:08 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “This letter could beastrong evidence at ICC to prosecute U Wira Thu and his political masters”
Paing Pyae sa Says:
October 30, 2012 at 3:47 am | Reply
Burmese Buddhism is really not aBuddhism.It’s totally anti-Buddhism.It’s Burmanism,based on racism.It’s notareligion,it’saterrorism.